समाजसेवा गर्न कुनै संस्थाको पदमै बस्नुपर्ने हो ? – Rangin Sansar Nepal Entertainment Portal
समाजसेवा गर्न कुनै संस्थाको पदमै बस्नुपर्ने हो ?
ईश्वर प्रसाद बस्याल( विवेक ) टोकियो जापान,
आफ्ना छोराछोरीलाई पालनपोषण गर्ने, उनीहरूलाई शत्रुबाट बचाउने र आफूले पनि आफ्नो आहार खोजी गरेर आफूलाई पाल्ने प्रवृत्ति पशुमा पनि पाइन्छ। जब मानिसले आफूभित्रका आदिम प्रवृत्तिको दमन गरेर सभ्य र सुसंस्कृत व्यवहार प्रदर्शन गर्दछ तब मात्र मानिस विवेकशील प्राणी बन्दछ; समाजको योग्य बन्दछ। मानिस सामाजिक प्राणी हो।समाजमा मिलेर बस्ने भएकाले समाजसँग मिलेर कार्य गर्ने भएकाले मानिसलाई सामाजिक भनिएको हो।समुदायको अर्थ जहाँ उदय अर्थात् अझ धेरै प्रगति उन्नति हुन्छ त्यसलाई समुदाय भनेर भनिन्छ। जब मान्छे एक्लो हुन्छ तब उसलाई परिवार र समाजको आवश्यकता पर्दछ। दुख सुखमा सहयोगी भूमिका निभाउने र मिलेर अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याउने संगठन नै समाज हो। सामान्य अर्थमा समाजको अर्थ मानिसहरुको समूह भन्ने लगाइन्छ तर समाजको वास्तविक अर्थ यो पनि होइन। वास्तवमा समाजको अर्थ मिलेर अगाडि बढ्नु सामूहिक आदर्श बाट प्रभावित भएर आदर्श प्राप्तीको लागि संघर्ष गर्नु हो ।वास्तवमा सामाजिक जागरुकता कसरी सम्भव हुन्छ होला त? यसका लागि धेरै कुराहरु माथि विचार गर्नु पर्दछ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको एउटा महान व्यक्तिको नेतृत्व हो। यसका लागि महान आदर्शवान व्यक्तित्वको आवश्यकता पर्दछ। आदर्श व्यक्तित्व को अभावमा मजबुत समाजको निर्माण हुनै सक्दैन अझ सामाजिक परिवर्तन त परको कुरा हो। कुनै पनि समाजमा जोडीन चाहने व्यक्ति एक अर्का प्रति परस्पर स्नेह तथा सहृदयताको भाव राख्नु आवश्यक हुन्छ। समाजले व्यक्तिगत जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। जस्तो कि कुलतमा लागेको कोही व्यक्ति छ समाज सँग सम्बद्ध नभएर स्वतन्त्र हिँडेको छ अर्थात् सामाजिक गतिविधिमा संलग्न छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजको मूल धारमा जोड्नका लागि जन-चेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्नु आवश्यक हुन्छ। वास्तवमा व्यक्ति विकासबाट परिवारको विकास र परिबारको विकासबाट समाजको विकास अनि समाजको विकासबाट राष्ट्र विकास हुने गर्दछ।
वास्तवमा समाजको मुख्य उद्देश्य र प्राप्तिमा हामी लागेका छौँ त ? व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा गर्न समाज सँग जोडिएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु, आफ्नो रवाफ देखाउनु, समाजलाई आफ्नो हातमा लिएर बिकृतिहरु फैलाउनु जस्तै: भूकम्प बाढी पिडित दीनदुःखीको नाममा उठाएको रकम चलखेल गर्नु समाज स्थापनाको उद्देश्य हो त? यस्ता कुराहरुले गर्दा आज आएर समाज स्थापना माथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ। समाजले यस्ता किसिमका विकृतिलाई हटाएर सबैमा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने होइन र? हिजोआज समाजसेवा का गतिविधिहरु देख्दा लाग्छ मात्र रमाइलो गर्ने हुँदा हुँदै झगडा गर्ने दीर्घकालीन योजना अनुसार काम गर्न नसक्ने र कुनै संस्थाको पदमा आबद्ध हुनको लागी समाजको प्रयोग गरिएको देखिन्छ। आखिर समाजसेवा गर्ने नै हो भने के पद मै बस्नुपर्ने हो ? त्यो भन्दा बाहीर रहेर सामाजिक कार्य गर्न नसकिने हो? होइन भने समाजलाई यि यस्तै कुराहरु मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भन्ने प्रश्नहरू अहिले आम मानिसले उत्तर खोजिरहेका छन् र समाज प्रतिको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आइरहेको छ।
समाजलाई बिकृती फैलाउन मात्र प्रयोग गरियो भन्ने पनि होईन। समाज अन्तर्गत जति पनि सामाजिक कार्यहरु भएका हुन्छन् जति पनि योगदान गरिएको छ त्यसलाई वास्तवमै राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। आफु पनि राम्रो नगर्ने र गरेकालाई पनि राम्रो गरिस पनि भन्न नसक्नु आफैमा मुर्ख्याई हुन्छ। समाजबाट बाटो,खानेपानी,विद्यालय निर्माणमा सहयोग,जनचेतना,तालिम,नेतृत्व विकासमा भूमिका आदि जस्ता कार्यहरु पनि सञ्चालित भएका छन्। के यसलाई पनि राम्रो भन्न नसक्ने? पक्कै पनि यि यस्ता कार्यहरुलाई सहयोग, सपोर्ट र धन्यवाद दिनै पर्छ।सामाजिक जनचेतना जगाएर समाजमा भएका कुरीति कुसंस्कार को परम्परा लाई हटाएर आदर्श र मेलमिलापको समाजको स्थापना गर्नु हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य पनि हो। देश बिदेशमा खुलेका संघ संस्थाहरुले यि उद्देश्यहरूलाई आत्मसात् गरेका छन् त ? यो तपाई हामी सबैको मूल्यांकनको विषय हो। राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्ने क्षमता हामिमा हुनुपर्दछ र राम्रो गर्ने संघ संस्थालाई सहयोग पनि गर्नुपर्दछ।
विदेश जस्तो ठाउँमा आफ्ना आफ्ना थरका समेत पनि संस्थाहरु निर्माण गर्न लागेको देखिन्छ। यसबाट कतै हाम्रो सामाजिक एकता र भाइचारामा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने त होइन? जातजाति र भाइभाइमा वैमनस्यता जस्ता कुरा उत्पन्न हुन नपाओस।त्यसले गर्दाखेरि पछि गएर अर्काले औंला उठाउन नपर्ने गरी कार्य गर्नुपर्दछ। दीर्घकालीन विकास अनुसारको सोच, सुसंस्कृत समाज निर्माणमा योगदान गरौं, फुटेर होइन जुटेर लागौं।
गायक तथा सङ्गितकार रामकृष्ण बममल्लको ‘सहयात्रा’ विमोचन हुँदै